Amniga Muqdisho oo aad loo adkeeyay
Amniga caasimadda ayaa aad loo adkeeyay, si looga gaashaanto qaraxyada kooxda dhiig-cabtada ah ee al-Shabaab ay la beegsanayaan dadka rayidka ah. Ciidammo dheeriya ayaa la soo dhigay magaalada iyo isgoysyada iyo jidadka waaweyn ee caasimadda, kuwaasoo sugaya amniga, isla markaana baaraya gaadiidka ay ka shakiyaan.
Ciidammada amaanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay xaafado ka tirsan caasimadda ka fuliyay howl-gallo ay amniga ku sugayaan, iyagoo baaritaanno ka sameeyay dhowr degmo kuna soo qabtay dad looga shakiyay in ay xiriir la leeyihiin argagixisada al-Shabaab.
Hay’adaha amniga dalka ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay gacan ku siiyaan sugidda amniga iyo cirib-tirka kooxaha argagixisada ah, ayna laamaha amniga ku soo war geliyaan dhaq-dhaqaaq kasta oo shaki galiya, si looga gaashaanto in argagixisadu carqaladeeyaan nabad gelyada caasimadda iyo guud ahaan dalka.
Ciidanka booliska ayaa gaadiidka gurmadka deg-degga ah ku diyaariyay goobaha gawaarida lagu baarayo si loogu qaado dadka xanuunsan, iyadoo sidoo kale shacabka loo diyaariyey gaadiid basas ah oo loogu talo galay in lagu fududeeyo isku socodka dadweynaha.
Xorriyo 1 Views : 10406